Amboary tsara ny rindranasan'ny Messages amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Miverina izahay miaraka amina lahatsoratra vaovao momba ny rindranasan'ny Messages amin'ny Mac. Fampiasa izay ampiasainay foana fa tsy nijanona mihitsy izahay handrindra mihoatra ny namboarina ho default ao amin'ny rafitra. Ny rindranasan'ny Messages dia fampiharana ny iray amin'ireo izay antsointsika hoe multiplatform ary io resaka io izay atombotsika amin'ny Mac dia azo tohizana amin'ny iPad na iPhone.
Ny rindranasan'ny Messages dia rindranasa mora ampiasaina indrindra izay misy lafiny azo ovaina izay tokony hojerenao raha liana amin'ny fanovana azy ireo ianao.
Raha te hikirakira ny rindranasan'ny Messages amin'ny Mac dia tokony hosokafantsika ny fampiharana Launchpad> Messages ary avy eo mankanesa any amin'ny bara fisakafoana ambony hanindriana azy Messages> Preferensi. Araka ny efa nolazaiko tao amin'ilay lahatsoratra noresahiko ny fomba fanakanana ny fifandraisana amin'ny Messages, ao amin'ny varavarankely aseho dia manana takelaka roa izahay ary ny voalohany amin'izy ireo, izany hoe ny General, no iray izay ho hitantsika anio.
Araka ny hitanao amin'ny pikantsary miraikitra amin'ny varavarankely izay hiseho, manana safidy samihafa azonay alamina izy ireo, ka azonay atao ny mamaritra raha ny hafatra momba ny resaka tianay hotehirizina ho an'ny Sow, 30 andro na herintaona.
Ity ambany ity sy eo ambanin'ny lozisialy Application dia manana andian-dahatsoratra ahafahantsika mampihetsika na tsia, izay ahafahanay mitahiry ny tantaran'ny resadresaka rehefa nakatona izy ireo, mampitandrina rehefa misy hafatra azo avy amin'ny fifandraisana tsy fantatra, mampitandrina raha ny anarantsika hita ao anaty resaka na hoe azo averina ny vokam-peo rehefa mandefa hafatra misy azy isika.
Manaraka izany dia mahita fidinana faharoa izay ahafahantsika misafidy ny feo tadiavintsika rehefa misy hafatra tonga amin'ny Mac, arahin'ny fidinana iray hafa izay ahafahantsika manamboatra ny toerana itehirizana ireo miraikitra. izay raha tsy izany dia voatahiry ao anaty fampirimana fampidinana.
Amin'ny faran'ny varavarankely dia azontsika atao ny manamboatra ny haben'ny endritsoratra ampiasaina raha mila ampitomboinao izany noho ny antony fakana sary. Araka ny hitanao dia tsy dia saro-pantarina ny safidin'ny fikirakirana ny rindranasan-kafatra Messages amin'ny Mac ary mamporisika anao izahay handamina azy ireo amin'ny filanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Amboary tsara ny fampiharana Messages amin'ny Mac